သင်ယူပြီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကို Opioid ဖြန်ဖြေခြင်း (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
သင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2012) ၏ Opioid ဖျန်ဖြေ
ကိုးကား: လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ 2012; 2: 14874 - Doi: 10.3402 / snp.v2i0.14874
ကီဗင်အက်စ် Holloway, PhD*
စိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အပြုအမူအစီအစဉ်၏ဦးစီးဌာန, Vassar ကောလိပ်, Poughkeepsie, NY, အမေရိကန်နိုင်ငံ
သင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက် opioids ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်နည်းစနစ်ကွဲပြား၏အသုံးပြုမှုကြောင့်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်တွင်မျိုးစုံမျိုးစိတ်နည်းစနစ်များနှင့်ဆေးဝါးထိန်းသိမ်းရေး, သိသာဖြစ်လာ opioid ဖျန်ဖြေအများအပြား features တွေ addressing ။ Opioids အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် differential ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ, အထီးဘာသာရပ်များသုံးပြီးအထူးသဖြင့်သူတို့အနေစဉ်အတွင်းတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ကူများပေးပို့၏အချိန်ကိုက်စူးရှသော opioids သင်ယူမှုအတွက်ရှိသည်သောအခန်းကဏ္ဍသြဇာလွှမ်းမိုး။ Opioids Non-အားဖြည့်များ၏ကာလအတွင်းမှာ conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional တုံ့ပြန်မှုငြိမ်းအေးဖို့အတိအလင်းဒီဇိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဘို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သင်ယူမှု၏ opioid ဖျန်ဖြေခြင်းဤအင်္ဂါရပ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် Paradigm ဖို့ကန့်သတ်ခံရဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ ဒီအကြားမှထူးခြားသော features တွေနောက်ခံအမူအကျင့်မူများကိုကိုက်ညီကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု၏အခြားရှုထောင့်အဘို့အဖြစ်, opioids အားဖြင့် conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေအားဖြည့်စနစ်များကိုဖြတ်ပြီးဘုံလုပ်ငန်းစဉ်များပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း။ အကြံပြု
keywords: opiate; အေးစက်; မျိုးသုဉ်း; ဇွဲ; naloxone; သင်ယူမှု
(Published: မတ်လ 15 2012)
လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပညာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်© ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ Kevin S. Holloway ။ ဤသည်မှာ Creative Commons Attribution-Noncomm စီးပွား 2012 Unported လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်တွင်ဖြန့်ဝေထားသည့် Open Access ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/), မည်သည့်အလတ်စားအားလုံးကို Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မျိုးပွားခွင့်ပြု, မူရင်းလက်ရာစနစ်တကျကိုးကားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သည်။
ကြွက်များ၊ ကြောင်များ၊ ကြွက်များ၊ အပြာရောင် gouramis နှင့် stickleback ငါးများ၊ ငုံးများ၊ ခိုများနှင့်သစ်သီးယင်ကောင်များအပါအ ၀ င်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးတွင်လိင်လေ့လာမှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ 1993; Domjan & Holloway, 1998; Krause, 2003; နှင့် Pfaus, Kippin, & Centeno, 2001 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုတစ် conspecific မှတုံ့ပြန်မှုကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါ။ အထီးကြွက်ခွဲစိတ်ပိတ်ထားယောနိ (Kagan ကပြောပါတယ်အတူအမျိုးသမီးထိတွေ့ပြီးနောက် copulatory ကြိုးစားမှုလျော့နည်းကျဆင်း 1955; Whalen, 1961) ။ ejaculate intromit သော်လည်းမမှခွင့်ပြုခဲ့အထီးကြွက်လည်း copulatory ကြိုးစားမှု (Kagan ကပြောပါတယ်, လျော့နည်းသွား 1955); intromissions (၇) ကိုခွင့်ပြုပါကအမျိုးသားများသည်ဤအရေးပေါ်မလိုအပ်ဘဲယောက်ျားများထက် ပိုမို၍ ခန်ဓာကိုယ်ကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းနိုင်မှုကိုရရှိသည် (Silberberg & Adler, 1974) ။ ကြွက်များသည်အမျိုးသားများထက် ပိုမို၍ မကြာခဏတောင်းခံလေ့ရှိပြီးယောက်ျားများသည်အနံ့ရနံ့ပါလျှင်ပထမ ဦး ဆုံးသန္ဓေတည်ရန်ရွေးချယ်သည် (Coria-Avila, Ouimet, Pacheco, Manzo, & Pfaus, 2005; Coria-Avila et al ။ , 2008) သို့မဟုတ်တစ်အရောင်ချယ် (Coria-Avila et al အားဖြင့်မှတ်သား။ , 2008) ယခင်ကအမျိုးသမီးက paced မိတ်လိုက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူတွဲ။ အထီးငုံးများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (CS) ကိုထိတွေ့ပြီးနောက် copulatory latency (Gutierrez & Domjan, 1996) ။ အမျိုးသမီးငုံးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ CS နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ယောက်ျား၏ရှေ့မှောက်တွင်လက်ခံနိုင်သောအကန့်အသတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအပြုအမူကိုပြသလိမ့်မည် (Gutierrez & Domjan, 1997).
အလားတူစွာပင် CS တုံ့ပြန်မှုကိုလိင်လေ့လာခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အထီးငုံးများသည်ယခင်ကလိင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်တွဲဖက်ခဲ့သောမတရားပြုမှုလှုံ့ဆော်မှုကိုလူမှုရေးအရနီးကပ်စွာတုန့်ပြန်မှုကိုပြသလိမ့်မည် (ဥပမာ Domjan, O'Vary, & Greene, 1988; Holloway & Domjan, 1993a, 1993b) ။ ကြွက်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဆင့်မြင့်အခန်းတွင်အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းကိုပြသလိမ့်မည် (Mendelson & Pfaus, 1989; ဗန် Furth & ဗန်ရိ, 1996; ဗန် Furth, Wolterink-Donselaar, & ဗန်ရိ, 1994) ။ CS အားတုန့်ပြန်မှုတွင်ပြောင်းလဲမှုများသည် CS မဟုတ်သောကိစ္စမဟုတ်လျှင်ပင်ထင်ရှားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ကြုံမှုသည်ထူးခြားသည့်ပိုးပန်းခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသံထွက်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီး (သို့သော်အထီးမဟုတ်သော) ဆီးနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည် (Dizinno, Whitney, & Nyby, 1978) ။ အထီးငုံးများသည်အမျိုးသမီးနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကြက်မ၏အမြင်အာရုံကိုသာကြည့်ရှုရန်အလျားလိုက်အပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုကိုချဉ်းကပ်ရန်သင်ယူလိမ့်မည် (Balthazart, Reid, Absil, Foidart, & Ball, 1995) ။
လိင်မှုဆိုင်ရာလေ့လာသင်ယူမှုကြောင့်ပြောင်းလဲမှုများသည်အရေးကြီးသောအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းများရှိသည် လိင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့မိသည့်ကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည် copulatory အခက်အခဲရှိသောဘာသာရပ်များတွင်တိုးတက်ခဲ့သည် (Cutmore & Zamble, 1988) ။ gourami ငါးများ၌လိင်မှုဆိုင်ရာ Pavlovian အေးစက်အခြေအနေများသည်ထုတ်လုပ်သောအမျိုးအနွယ်ကိုများစွာတိုးတက်စေခဲ့သည် (Hollis, Pharr, Duas, Britton, & Field, 1997) ။ ဂျပန်ငုံးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအရထိတွေ့မိသောသန္ဓေသားလောင်းနှင့်သုက်ပိုးများပိုမိုများပြားစွာသုတ်သွင်းထားသောပုံစံတွင် (Domjan, Blesbois, & Williams)၊ 1998) ။ Adkins Regan နှင့် MacKillop (2003) တို့ကအထီးငုံးများဖြင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်အခြေအနေတွင်မျိုးပွားခြင်းသည်သန္ဓေသားဥကိုဖြစ်ထွန်းစေသည်။ သုက်ပိုးယှဉ်ပြိုင်မှုအခြေအနေတွင်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကြောင့်ငုံးများကိုသားပေါက်များပိုမိုမွေးဖွားခွင့်ပေးခဲ့သည် (Matthews, Domjan, Ramsey, & Crews, 2007).
တိရစ္ဆာန်များအတွက်နားမလည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ opioid ဖျန်ဖြေရှာဖွေစူးစမ်းစာပေ၏ correspondingly ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် (Argiolas တွေ့မြင်ရှိပါတယ်, 1999; သိပ်မရှိပါဘူး, 2009; Pfaus, 1999; Pfaus & Gorzalka, 1987a; ဗန် Furth, Wolterink, & ဗန်ရိ, 1995 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက်) ။ ယေဘုယျအားဖြင့် opioids နှင့် opioid မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုအခန်းကဏ္ have ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ β-endorphin ကိုအုပ်ချုပ်မှုကအထီးကြွက်များတွင် Mount, intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုတားစီးပေးပြီး (McIntosh, Vallano, & Barfield, 1980) နှင့်အမျိုးသမီးများတွင် Lordosis အပြုအမူကိုတားဆီးခဲ့သည် (Pfaus & Gorzalka, 1987b; Wiesner & မော့စ်, 1986) ။ မော်ဖင်းအကိုက် (Pfaus & Gorzalka, 1987b) နှင့် methadone (Murphy က, 1981) ယောက်ျားများကြွက်များ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုလည်းတားဆီးပေးပြီးမော်ဖင်းအကိုက်သည်အမျိုးသမီးများအား Lordosis ကိုတားဆီးခဲ့သည် (Pfaus & Gorzalka, 1987b) ။ Endomorphin-1 သည်တတိယ ventricle တွင်ထိုးသွင်းထားသော endogenous µ-opioid receptor specific peptide၊ သန္ဓေတည်ခြင်းကြာရှည်မှုနှင့် interintromission ကြားကာလများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း (Parra-Gamez၊ Garcia-Hidalgo, Salazar-Juarez, Anton, & Paredes, 2009) ။ အထီးငုံး, အδ-opioid agonist D-Ala အတွက်2-Met5preoptic နှင့် anterior hypothalamic inရိယာများတွင်ထိုးသွင်းထားသော -ankephalinamide သည်ရန်လိုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလျော့နည်းစေသည် (Kotegawa, Abe, & Tsutsui, 1997) ။
opioids ၏ inhibitory သက်ရောက်မှုများသည်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာများဖြစ်သည် (ဥပမာ Agmo, Rojas, & Vazquez) 1992; Band & Hull, 1990; Mitchell & Stewart က 1990; ဗန် Furth, ဗန် Emst, & ဗန်ရိ, 1995), opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားဆီးသောယေဘုယျနိဂုံးချုပ်အကြီးအကျယ်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ opioid ရန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများအားဖြင့်အတည်ပြုသည်။ Naloxone သည်လိင်မလှုပ်မရှားသောအထီးကြွက်များတွင်စုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Gessa, Paglietti, & Pellegrini Quarantotti) 1979) ။ ထို့ပြင်သူကပထမဦးဆုံး mount မှအောင်းနေချိန်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (McIntosh et al မတိုင်မီ intromissions ၏နံပါတ်လျော့နည်းသွား။ , 1980) ။ Naloxone သည်လည်းကြွက်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့သည် (Pfaus & Gorzalka, 1987a တွင်ဖော်ပြထားသည်) ။ အထီးဟမ်းစတားများတွင် naltrexone သည်အရှိန်ကိုလျော့ကျစေပြီးသန္ဓေတားခြင်းမပြုမီ intromissions များကိုလျှော့ချခဲ့သည် (Murphy, 1981) ။ naloxone ၏ဗဟိုထိုးပေးသောအခါ, အထီးဂျပန်ငုံး Kotegawa et al (အသေးစိတ် copulatory အပြုအမူပြ။ , 1997; Riters, Absil, & Balthazart, 1999) ။ သတိပြုသင့်သည်မှာယောက်ျားလိင်အပြုအမူ၏ကဏ္ one တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ postejaculatory refractory ကာလသည် naloxone ထိုးဆေးများဖြင့်များသောအားဖြင့် naloxone ထိုးဆေးများ (McConnell, Baum, & Badger, 1981; Sachs, Valcourt နှင့် Flagg၊ 1981) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် lordosis အပြုအမူ naloxone (Sirinathsinghji ၏ဗဟိုထိုးခြင်းဖြင့် facilitated ခဲ့ပါတယ်, 1984; Sirinathsinghji, Whittington, Audsley, & Fraser, 1983) opioid ရန်တိုက်ဖျက်ရေးသမားများ၏အရံထိုးဆေးများသည်ထိရောက်မှုမရှိဟု (သို့) အနည်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြသော်လည်း (Wiesner & Moss, 1986).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစနစ်နှင့် Non-သင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် opioids ၏ထင်ရသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာမခံအခန်းကဏ္ဍအတွက်သင်ယူမှု၏အရေးပါမှုကိုပေးထား, အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုအတွက် opioids ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဒီဇိုင်းလေ့လာမှုများ၏ဆွေမျိုးနည်းပါးအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ opioids အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ၏ခေတ်ပြိုင်အစီအစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ပေုံမရှိခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာလက်ရှိလေ့လာမှုများအတွက်တင်ပြရလဒ်များကို၏ကျယ်ပြန့်အနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်, သင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ opioid ဖျန်ဖြေခြင်း၏ရရှိနိုင်လေ့လာမှုများကိုတင်ပြအသုံးပြုတဲ့လုပျထုံးလုပျနညျးစူးစမ်း, နှင့်ရလဒ်များ၏မညီမျှမှုတွေအတွက် parsimonious ရှင်းပြချက်အဆိုပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလှည့်၌ဤမေလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤနှစ်ခုအရေးကြီးသောပြုပြီ၏လမ်းဆုံပိုပြီးစနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးလှုံ့ဆော်ခြင်း။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုအတွက် opioids ၏အခန်းကဏ္ဍကို addressing စမ်းသပ်ချက်
သင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ opioid ဖျန်ဖြေရှာဖွေစူးစမ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ opioid စနစ်၏ခြယ်လှယ်မှုကြောင့်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများပြောင်းလဲအကဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ဖျန်ဖြေလျှင်, မိမိတို့၏ပိတ်ဆို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional တုံ့ပြန်မှုများ၏ဝယ်ယူအကျိုးသက်ရောက်စေသင့်ပါတယ်။ Miller နဲ့ Baum (1987) တစ် ဦး အေးစက်ရာအရပျ preference ကို (CPP) ပါရာဒိုင်းအလုပ်။ ကြွက်များကိုသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်အတူကူးစက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် (Camacho, Portillo, Quintero-Enriquez, & Paredes, 2009, CPP ကလုပျထုံးလုပျနညျးအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်၏အရေးပါမှုကိုအသေးစိတ်အတွက်) တစ်ဦးပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းအမျိုးသမီး 10 ကြိမ်နှင့်အတူ။ အခြားရက်ပေါင်းတွင်, ယောက်ျားဒုတိယဦးစားပေးခန်း၌တစ်ဦးတည်းတစ်ချိန်တည်းနေခဲ့ရသည်။ ဤအအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့နောက်ဆက်တွဲ, ယောက်ျားဖြစ်စေ castrated ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်အတုအယောင်-operated ။ သူတို့ဟာထို့နောက်ခွဲစိတ်အောက်ပါ 5.0 ရက်ပေါင်းတစ်ကြိမ်နှင့်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်7ရက်ပေါင်းတစ်ကြိမ်, နှစ်ကြိမ် (14 / ကီလိုဂရမ် SC mg) သို့မဟုတ်ဆားမော်တော်ယာဉ်ထိုးလွတ်လပ်စွာရံ naloxone ပြီးနောက်ဖြစ်စေအခန်းထဲကဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဤအ 15 မိစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့မပါအမျိုးသမီးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ castrated ခဲ့အထီး, naloxone နှင့်အတူထိုးသွင်း, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးတစ်နေ့လျှင်7အပေါ် (သူတို့ကအမျိုးသမီးကြုံတွေ့ခဲ့ရသော) အစပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုတို့တွင်တခုတ်တရလျှော့ချရေးပြခဲ့တယ်။ တစ်ရက် 14 တွင်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု naloxone နှင့်အတူထိုးသွင်းသည့် castrated ဘာသာရပ်များအတွက် ပို. ပင်ထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူသက်သေအထောက်အထားမှာထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်တစ်ဦးလက်ခံအမျိုးသမီး၏မက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများကနေဆင်းသက်လာအကျိုးကိုတစ်ဦးအလားအလာလျှော့ချရေးညွှန်ပြအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
အလားတူ CPP စမ်းသပ်မှု (Agmo & Berenfeld, 1990), အထီးကြွက်ကြိုတင် 16 မိများအတွက်ကနဦး Non-နှစ်သက်သောအခန်းတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်နေရာချထားပေးရန် (30 / ကီလိုဂရမ် mg) ဖြစ်စေရေစက်ရေသို့မဟုတ် naloxone နှင့်အတူ Peripheral ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ သုံးလိင်အားဖြည့်စမ်းသပ်မှုတွေအားလုံးဘာသာရပ်များရေစက်ရေထိုးလက်ခံရရှိတပါးတည်းသာအစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်း 30 မိသုံးစွဲရသောသုံးစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူ alternated, ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ တနည်းကား, opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ဖျန်ဖြေသောအနက်နှင့်ကိုက်ညီ, naloxone တစ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဝယ်ယူပိတ်ဆို့ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲထိုနှစ်တွင်ပင်ထုတ်ဝေအခြားစမ်းသပ်အစီရင်ခံစာဒေတာ၏ဤအနက်ကိုရှုပ်ထွေး။ Mehrara နှင့် Baum (1990) နောက်တဖန်တစ် CPP ကပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သို့သော်အစား CPP ကအခန်းကြိုတင်နေရာချထားဖို့အမျိုးသမီးနှင့်အတူအဖော်ရှာခြင်းထက်, အထီးကြွက်ဟာအစပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းတိုက်ရိုက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulate ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ယောက်ျားဖြစ်စေ castrated သို့မဟုတ်နဂိုအတိုင်းနှင့်ဆားထိုးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ Peripheral ကြိုတင် naloxone ၏ 1 သို့မဟုတ်5mg / kg ဆေးထိုးဖြစ်စေလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ ရှစ်သင်တန်းများ, ယောက်ျားယောက်ျားတို့သည်အစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းတစ်ဦးတည်းအချိန်၏တူညီသောငွေပမာဏကိုသုံးစွဲရသောအခြားရက်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်လေးအောင်မြင်ရန် 1 ဇမှတက်များအတွက်ကနဦး Non-နှစ်သက်သောအခန်းအမျိုးသမီးထိတွေ့ခဲ့ကြရသောလေးကောက်ယူခဲ့ကြ ။ ဆား-ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ (ကလမ်းကြောင်းသစ် castrated ဘာသာရပ်များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီလျှော့ချရန် naloxone များအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်), naloxone မထိုးသိသိသာသာဖြစ်စေသည့်နဂိုအတိုင်းသို့မဟုတ် castrated ခွအေနအေအတွက်ကနဦး Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကများအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဝယ်ယူ attenuated ။ စိတ်ဝင်စားစရာအခြေခံကျကျ Miller နဲ့ Baum (ပုံတူကူးယူကြောင်းဒုတိယစမ်းသပ်မှုအတွက်1987), naloxone နောက်တဖန်ဒီအစောပိုင်းကစမ်းသပ်မှုနှင့်ဆင်တူကာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤအချိန်, သို့သော်, စမ်းသပ်မှု 1 များ၏တွေ့ရှိချက်များအလငျး၌ဤအချက်အလက်အသစ်ကိုချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်ဘတ်ခဲ့ကြသည်နှင့်အ opioids မဟုတ်မူလတန်းဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက်ဒါပေမဲ့ conditional မက်လုံးပေးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သောစာရေးဆရာများမှအကြံပြု ။
ဤအယခင် CPP ကလေ့လာမှုများအတွက်, ယောက်ျားသည် non-အားဖြည့်ရက်ပေါင်းတခုတခုအပေါ်မှာအချည်းနှီးသောအခနျးထိတွေ့ခဲ့သည်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း putatively Non-အားဖြည့်ရက်ပေါင်းအပေါ်ပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်း non-လက်ခံအမျိုးသမီးမှအထီးကြွက်ဖော်ထုတ်ပါဝငျသညျ။ Hughes က Everitt နှင့်ဟားဘတ် (1990) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု၏ opioid ဖျန်ဖြေနှစ်ခုစမ်းသပ်မှုတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အထီးကြွက်ပေးခဲ့ရှစ် 15-မိသည့်ကနဦးနှစ်သက်အခန်း Non-လက်ခံအမျိုးသမီးဆင်တူထိတွေ့မှုနှင့်အတူ alternated သည့်ကနဦး Non-နှစ်သက်သောအခန်းအမျိုးသမီး receptive မှထိတွေ့မှုအားဖြည့်။ β-နဲ့အတူ Endorphins သို့မဟုတ် naloxone အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ-anterior hypothalamic ဧရိယာသို့ထုံမွှန်းခဲ့ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ် naloxone Peripheral အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်မတိုင်မီအမျိုးသမီးဖယ်ရှားခဲ့ပြီးသောစဉ်အတွင်းတစ် 5-မိစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်ဖို့ (15 / ကီလိုဂရမ် mg) ။ အထီးလွတ်လပ်စွာစမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်ဘို့အချိန်ဖြုန်းဖို့ရာအခန်းကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပြုတ်ရည်β-နဲ့အတူ Endorphins မဟုတ်သလိုထုံမွှန်း naloxone မချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ စနစ် naloxone ဒီအခြေအနေချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုလျှော့ချ။
Hughes et al အသုံးပြုသောဒုတိယစမ်းသပ်။ (1990) ဒုတိယယူမှုကိုဆာအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အထီးကြွက်ပထမဦးဆုံးအသုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိနဲ့လှုံ့ဆော်မှုအလင်းကို (CS) ပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာပြီးတော့အားဖြည့်အဖြစ် CS ၏တင်ပြချက်နှင့်အတူလီဗာတွန်းအားပေးရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးတစ်ဦး session ရဲ့အဆုံးမှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာဒီတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်ခဲ့ပေမယ့်စမ်းသပ်မှု၏သင်တန်းကာလအတွင်းအမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်လိုအပ်သောတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက် 100 မှတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့တစ်ဦး fixed ကြားကာလအချိန်ဇယားကိုမိတ်ဆက်နှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏အဆုံးအားဖြင့်အမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်ခဲ့သည် အမျိုးသမီးမိတ်ဆက်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 200 တုံ့ပြန်မှု (နှင့်ဝင်ငွေ 20 CS ထိတွေ့မှု) အောင်။ အဆိုပါ anterior hypothalamus (mPOA) ၏ medial preoptic ဧရိယာသို့β-နဲ့အတူ Endorphins ပြုတ်ရည်ဟာဆာပအပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။5မှာ naloxone ၏ Peripheral အုပ်ချုပ်မှု / ကီလိုဂရမ် mg, ဒါပေမယ့်မ 1.0 သို့မဟုတ် 2.5 / ကီလိုဂရမ် mg, အမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်လျှော့ချရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
Agmo နှင့်ဂိုမက်ဇ (1993) နောက်တဖန် Agmo နှင့် Berenfeld (1990) တွင်စတင်မိတ်ဆက်သည့် CPP ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဥပမာအရ, naloxone, methylnaloxonium ၏ပုံစံ, အထီးကြွက်၏ (NAC) ကို mPOA သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens သို့5μg / cannula မှာထုံမွှန်းခဲ့ CPP ကလုပျထုံးလုပျနညျးမတိုင်မီမိ 1 ။ အဖြစ်မတိုင်မီယောက်ျားသီးခြားကျင်းပနိုင်ရန်ဧရိယာ၌တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်ခွင့်ပြုပြီးတော့ 30 မိများအတွက် CPP ကယန္တရားများ၏ကနဦး Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ဆားထုံမွှန်းခံခဲ့ရအခြားရက်ပေါင်းတွင်, မရှိအမျိုးသမီးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းဟာအစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်း 30 မိဘို့နေရာချပေးခဲ့သည်။ Naloxone အဆိုပါ mPOA သို့ထုံမွှန်းပေမယ် NAC CPP ကပိတ်ဆို့မဟုတ်ပေမယ့်အမျိုးသမီးမှာညွှန်ကြားထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါက mPOA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ site သောစာရေးဆရာများမှအကြံပြုခဲ့သည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်သင်ယူမှုတို့ကိုအမျိုးသားအဆင့်ကြွက်များတွင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောအဆင့်ပြောင်းလဲသောအပြုအမူကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ထပ်မြှောင်လှောင်အိမ်ထဲမှာ, အမျိုးသမီးမမိတ်ဆက်မီ, အထီးအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူကူးစက်မှုမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူအဆင့်ပြောင်းလဲမှုအရေအတွက်ကတိုးမြှင့်ပြသပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် Non- လက်ခံမိန်းမအားထိတွေ့မှုအောက်ပါ အတော်ကြာနီးပါးတူညီနီးပါးတသမတ်တည်းအဆင့်ပြောင်းလဲမှုစမ်းသပ်မှုများတွင် naloxone anticipatory အဆင့်ပြောင်းလဲမှုတိုးမြှင့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်အထီးများကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်စမ်းသပ်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီး ၅ မိနစ်အကြာတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုအခန်းထဲသို့ (လက်ရှိအထီးမပါသည့်အဆင့်တွင်) မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ရံဖန်ရံခါ naloxone အုပ်ချုပ်မှုသည် ၁.၀ သို့မဟုတ် ၁၀.၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဆေးများ (van Furth, Wolterink-Donselaar, & van Ree, 5) တွင်ထိုနေ့၏အလင်းအဆင့်တွင်စမ်းသပ်မှုဖြစ်စေခဲ့သည် (van Furth & van Ree, 1994) နှင့် ventral tegmental areaရိယာ (ဗန် Furth & ဗန် Ree, သို့တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းလျှင်) 1996) ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတွက် opioids များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနေကြသည်။ တစ်ဦးကပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုသို့သော်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ဤနှင့်လိင်လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခု opioid အခန်းကဏ္ဍ၏အခြားအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Agmo (2003b) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်များအတွက်ကြော့ technique ကိုပေးအပ်သည်။ အထီးကြွက်ကြီးမားတဲ့စမ်းသပ်မှုနယ်ပယ်တွင်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ နှစျခုထရံအခန်းတို့သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းနှင့်စမ်းသပ်နယ်ပယ်တွင်၏ရှည်လျားသောနံရံဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်မှ affixed ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလက်ခံနှင့် Non-လက်ခံအမျိုးသမီး conspecifics အဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု, ဤအိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့ချထားနိုင်, နှင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အထီးအပြုအမူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ (Agmo ဒီကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်း2003a) ကို opioid စနစ်ကကြိုးကိုင်နေချိန်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များတစ်ပြိုင်နက်တဦးတည်းအခန်းတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အခြားတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အတွေ့အကြုံရှိအထီး conspecific နှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ သူက Peripheral ထိုးမော်ဖင်းအကိုက် (1, 4, ဒါမှမဟုတ် 8 / ကီလိုဂရမ် mg) မဟုတ်သလို naloxone (1,4နှင့် 16 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) မမက်လုံးပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါအရံ opioid agonist loperamide သည်ဤစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဒါပေမယ့် Non-opioid ယန္တရားများမှတဆင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုပြု၏။ ထို့ကြောင့်, Agmo opioids အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောမဟုတ်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ဂျပန်ငုံးများတွင်လိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်တန်ဖိုးလျှော့ချခြင်း (Holloway & Domjan, 1993b) သို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (Holloway & Domjan, 1993a) တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional ချဉ်းကပ်ပါရာဒိုင်းအတွက်တုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ ထိုအလုပျထုံးလုပျနညျးမှာတော့အထီးငုံးပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးငုံးကြက်မှဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေတဲ့ CS ၏အကျဉ်း (30 s ကို-1 မိ) တင်ဆက်မှုပေးအပ်ထားတယ်။ က opioids ငုံးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖျန်ဖြေသောအမှုဖြစ်လျှင်, ထို့နောက် naloxone အားဖြင့် opioid receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းပြောင်းလဲသည့် CS တုံ့ပြန်မှုသင့်ပါတယ်။
ငုံးအတွက်စမ်းသပ်အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်အပြုအမူတစ်ခုမှာနည်းလမ်းကတော့ CS အဖြစ်အထဲတွင်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောအလျားလိုက်အပေါက်နှင့်အတူတံခါးနောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီးမှအမြင်အာရုံ access ကိုအတူယောက်ျားတင်ပြပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ထို့နောက်ကြက်မှ copulatory access ကိုလိုက်နေသည်။ ကြက်မနှင့်အတူသုတ်ရည်ထိမတိုင်မီကယောက်ျားဟာအလျားလိုက်အပေါက်ပြတင်းပေါက်မှာနည်းနည်းအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ မိတ်လိုက်ပြီးနောက်, အထီးကျယ်ပြန့်ကာလအဘို့အပြတင်းပေါက်မှာရပ်နေပါလိမ့်မယ်။ Riters et al ။ (1999) conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် naloxone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်အပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်တတိယ ventricle သို့မဟုတ် naloxone ၏ဗဟိုထိုး (1.0, 10.0 နှင့် 50.0 မီလီဂရမ် / kg ပမာဏတိုးပွားလာ) အရံမရှိ။ အထီးငုံးတံခါးကိုအလျားလိုက်အပေါက်မှတဆင့်အမျိုးသမီးကိုကြည့်ဖို့ဆက်ပြောသည်။
နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် Holloway, Cornil နှင့် Balthazart (၂၀၀၄) သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအထီးငုံးများနှင့်အတူလိင်ချဉ်းကပ်မှုအခြေအနေစမ်းသပ်မှုကိုးခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငုံးငှက်ကိုအမြင်အာရုံထိတွေ့မှုဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့လူသိများလို့ပဲ (Holloway & Domjan, 1993b), ဘာသာရပ်များ Non-အားဖြည့်ဆီးမခံရဖို့စမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အကြောင်း, တံခါးကိုအလျားလိုက်အပေါက်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုအမျိုးသမီးတံခါးကိုနောက်ကွယ်မှပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ခဲ့သည့်အတွက်ရှစ်စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမျိုးသုဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်း naloxone ၏ဗဟိုထိုးသိသိသာသာဆား-ထုံမွှန်းထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဘာသာရပ်များအတွက်တုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional လျှော့ချရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးအားဖယ်ရှားခြင်းသည်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများအကြား CS ကိုပြောင်းလဲစေသောကြောင့်တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချခြင်းသည် naloxone သည် CS ပြောင်းလဲခြင်းကိုအမျိုးသားများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့အထီးငုံးတွေဟာမျိုးသုဉ်းမှုစမ်းသပ်မှုတွေအတွင်းမှာနေရာမှာထားနိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုချဉ်းကပ်ဖို့အေးစက်ခဲ့တယ် (Holloway & Domjan၊ 1993a, 1993b) ။ အဆိုပါ CS ဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဆဲတောင်မှအခါ, naloxone ၏ဗဟိုထိုးချရန်သုဉ်းအဆင့် (Holloway, Shaw, Cornil နှင့် Balthazart, 2009) စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional ချဉ်းကပ် attenuated ။
Riters et al ။ (1999) အထီးဂျပန်ငုံးအတွက်ခြွင်းချက်မရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် naloxone ၏ဗဟိုနှင့်အရံထိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတင်းပို့ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် naloxone ၏အရံထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့, နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက် CS အဖြစ်မတရားလှုံ့ဆော်မှုအရာဝတ္ထုနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ပထမစမ်းသပ်မှုတွင်ငုံးငှက်များကိုအစပိုင်းတွင် CS သို့ချဉ်းကပ်ရန်အပူချိန် ၃၀ နှင့်သက်ဆိုင်သောကြက်မကြက်ကိုကြက်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ မျိုးသုဉ်းသည့်အဆင့်တွင်အထီးများကိုအစဉ်အဆက် CS တစ်ခုတည်းတင်ဆက်မှုများမတိုင်မီအမျိုးသားများအား naloxone (30 mg / kg) ဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့သည်။ ဆားဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Naloxone သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေပြုလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုမျိုးသုဉ်းရန်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုတွင်ငုံးငှက်များကိုမကြေငြာမီပုဆိန်များကို ၃၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်အတူတူပင်ထိုးသည်။ အကယ်၍ opioid စနစ်သည်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်တွင်ပါ ၀ င်ပါကမျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ naloxone ထိုးဆေးများသည် CS ကိုလိင်အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုတုန့်ပြန်မှုကိုဆားဆေးထိုးထိန်းချုပ်မှုများအတိုင်းအတာနှင့်ရရှိခဲ့သည် (Holloway & Jensen, 1997).
နောက်ပိုင်းတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုစမ်းသပ်မှု၏ရယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းခြင်းအဆင့်နှစ်ခုစလုံးတွင် naloxone (၃၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) အစရှိသဖြင့်စီမံထားသောသက်ရောက်မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည် (Holloway & Meerts, 2003) ။ နောက်တကြိမ်, သုတ်ရည်ထိနဲ့မတရား CS တွဲကြောင်းအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက် naloxone အဆိုပါ CS ဖို့ညွှန်ကြားထားတုံ့ပြန် conditional ချဉ်းကပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆက်ဆက်သည် Non-အားဖြည့် CS တင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းသို့သော်သိသိသာသာ naloxone ထိုးဆက်လက်သိသိသာသာတုံ့ပြန် conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်၏မျိုးသုဉ်း facilitated ။
အထက်ပါလေ့လာမှုများအားလုံးတွင်တိရစ္ဆာန်အထီးများသည်ဘာသာရပ်များဖြစ်သည်။ လေ့လာပြီးသောအမျိုးသမီးလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖျန်ဖြေရာတွင် opioids ၏အခန်းကဏ္ofကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ CPP ကို ​​naloxone ထိုးသွင်းထားသောကြွက်များတွင်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည် (Paredes & Martinez, 2001) ။ အမျိုးသမီးများသည်အစပိုင်းတွင် ဦး စားပေးမဟုတ်သောအခန်းထဲသို့ ၃၀ မိနစ်မထားမှီသန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်အမြှေးပါးကိုအရှိန်မြှင့်ခွင့်ပြုသည်။ အခြားရက်များ၌သူတို့သည်ကန ဦး ဦး စားပေးအခန်း၌အချိန်အတူတူပင်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ အားဖြည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမတိုင်မီအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များကို naloxone (၄ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) သို့မဟုတ်ရေစက်ရေဖြင့်အစပိုင်းတွင်ထိုးသွင်းခဲ့သည်။ ဒီ CPP ပါရာဒိုင်း (ဥပမာ Agmo & Berenfeld, 30) မှအမျိုးသားကြွက်များအတွက်အစီရင်ခံခဲ့သည့်အတိုင်း naloxone သည်လိင် CPP ကိုဝယ်ယူခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးကြွက်ဘာသာရပ်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာ CPP စမ်းသပ်မှုသည် naloxone ကို mPOA၊ hypothalamus (VMH) ၏ ventromedial nucleus, amygdala (Me) နှင့် NAC (Garcia-Horsman, Agmo, & Paredes, 2008) သို့ထိုးသွင်းခြင်းနှင့်နီးကပ်စွာပုံတူကူးခဲ့သည်။ ။ mPOA, VMH နှင့် Me များသို့ Naloxone (၅ µg ထည့်သွင်းခြင်း) များသည်လိင် CPP ကိုဝယ်ယူခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
သင်ယူအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ opioid ဖျန်ဖြေကိုလည်း conditional မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှု (Coria-Avila et al အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ , 2008) ။ ယခင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကနဦးမင်းထက် olfactory နှင့်အမြင်အာရုံတွေကိုအရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူဆက်စပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကြွက်ယခင်က PACE မိတ်လိုက် (Coria-Avila et al ကာလအတွင်းပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သည့်အနံ့နှင့်အတူမှတ်သားအထီးကြိုက်တတ်တဲ့အစီရင်ခံခဲ့ကြ။ , 2005) ။ နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်, Coria-Avila et al ၌တည်၏။ (2008) အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေမတိုင်မီထိုးဒီ preference ကို၏ဝယ်ယူရံ naloxone (4 mg / kg) ကပိတျဆို့ထားနိုင်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ စမ်းသပ်မှု 1 များတွင်အမျိုးသမီးသူတို့ PACE နိုင်ဘူးမိတ်လိုက်အခြေအနေများတွင် PACE မိတ်လိုက်အခြေအနေများနှင့် Non-ရနံ့ယောက်ျားအတွက်ဗာဒံသီးရနံ့ယောက်ျားနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု2ခုနှစ်, albino နှင့်ခြယ်ပစ္စည်းအထီးကြွက်တန်ပြန်မျှမျှတတအုပ်စုများအတွက်အရှိန်အဟုန်နှင့် unpaced မိတ်ဖက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်များတွင်ဝယ်ယူအဆင့်စဉ်အတွင်းထိုးသွင်း naloxone non-မူးယစ်ဆေး preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းဆက်စပ်တွေကို pacing အထီးဖြစ်စေသောစပါးများအတွက် preference ကိုနှောင့်အယှက်မှရှာတွေ့ခဲ့သည်။
သတိထားသင့်သည်မှာအေးအေးဆေးဆေးထားရှိထားသောမိတ်ဖက်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုကြွက်ကြွက်များတွင်အေးမြသည့်သုတ်ရည်ကြိုက်နှစ်သက်မှုပုံစံကိုလေ့လာထားသည်။ ခရမ်းလွန် naloxone (၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ထိုးဆေးကို Almond-scented အမျိုးသမီးဖြင့်စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီဆေးကြောထားသောကြွက်များအားအလားတူရနံ့သန္ဓေသားနှင့်အတူသုက်ပိုးမွှေးကြိုင်။ မွှေးကြိုင်သောအမျိုးသမီးများနှင့်အတူသန္ဓေတည်ခြင်းစမ်းသပ်မှုကိုမပြသနိုင်ခဲ့ပါ။ -Berieult, Nakanishi, & Pfaus, 2009).
ညစ်ညမ်းသောအထီးအိပ်ရာ၌လိင်အင်္ဂါမှလိင်အင်္ဂါများ၌ကြွက်များတွင် CPP ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်တစ်ဖက်တွင်မြေဆီလွှာပါ ၀ င်သောပန်းကန်များနှင့်နောက်တစ်နေ့တွင် ၄ ရက်ဆက်တိုက် ၁၀ မိနစ်အတွင်းစင်ကြယ်သောအိပ်ယာခင်းထားသောပန်းကန်ပါရှိသောကြီးမားသောစမ်းသပ်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုထားသည်။ Non- အားဖြည့်စမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Naloxone (၁ နှင့် ၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) အားအေးခဲနေစဉ်ကာလအတွင်းစီမံအုပ်ချုပ်သော်လည်း (စမ်းသပ်မှုမဟုတ်ပါ) လိင် CPP (Agustin-Pavon၊ Martinez-Ricos, Martinez-Garcia, & Lanuza, 10) များဝယ်ယူခြင်းကိုမနှောင့်ယှက်ခဲ့ပါ။
အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်စမ်းသပ်ချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်အမျှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအမျိုးမျိုးသင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် opioids ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကိုးကားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် မူတည်. တဦးတည်း opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, ဒါကြောင့်, ဖျန်ဖြေသို့မဟုတ် play လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional တုံ့ပြန်မှုများဝယ်ယူမအခန်းကဏ္ဍနှင့်များမှာဖြစ်စေကြောင်းအငြင်းအခုံလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တောင်မှအများဆုံးအသုံးများ technique ကို, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွင်း, ကောက်ချက်နှစ်ခုလုံးအစုံအဘို့ခွင့်ပြုမယ်လို့ကှာဟရှိပါသည်။ ဒါဟာကောက်ချက်နှစ်ခုလုံးစုံမှန်ကန်သောဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်, မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။
ထိုအလုပျထုံးလုပျနညျးအကဲဖြတ်တစ်ခုမှာလမ်းဆင်တူရိုးမှား opioids တုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Conditions ကိုထိခိုက်သတင်းပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ၌၎င်း, သင်တန်း၏, opioids သင်ယူတုံ့ပြန်မှုများ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့မထင်ကြဘူးဘယ်မှာအခြေအနေများတွင်တည်ရှိခြင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု (စမ်းသပ်မှု 1990) တွင် opioids များအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် opioids (စမ်းသပ်မှု 2) ပါဝင်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုသတင်းပို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Mehrara နှင့် Baum (1) တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့စတင်အမှတ်တွေ့ရမယ်။ နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်များအကြားထိရောက်သောကွာခြားချက်ထိရောက်သော CS (အစပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲက) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (အမေရိကန်) (သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိ) တွဲခဲ့ကြခြင်းမပြုမီပထမဦးဆုံး၌, naloxone အုပ်ချုပ်ခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့ကြောင့် CS-အမေရိကန်ဒဿနိကဗေဒ naloxone အုပ်ချုပ်ရေး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရာအရပျကိုယူ။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုများတွင် CS-အမေရိကန်ဒဿနိကဗေဒ naloxone အုပ်ချုပ်ရေးမတိုင်မီရာအရပျကို ယူ. , naloxone အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်အခါစမ်းသပ်အဆင့်စဉ်အတွင်း, သာ CS ယောက်ျားဘာသာရပ်မှမရရှိနိုင်ခဲ့။ အမှန်မှာဒီ CS တစ်ဦးတည်းစမ်းသပ်တင်ဆက်မှု (Miller နဲ့ Baum အတွက်အမှုဖြစ်ခဲ့သည်1987) လည်း naloxone နှင့်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအမှု naloxone လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု attenuate မှရှာတွေ့ခဲ့သည်ရှိရာ CPP ကအခြေအနေများအများစု၌, ဘာသာရပ်တစ်ယောက်တည်း CS ထိတွေ့ခဲ့ကွောငျးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ Agmo နှင့် Berenfeld (1990), Agmo နှင့်ဂိုမက်ဇအားဖြင့်လေ့လာမှုများအတွက် (1993), သိပ်မရှိပါဘူးနှင့် Martinez (2001), နှင့် Garcia က-Horsman et al ။ (2008), naloxone အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ဘာသာရပ်များအတွက် CS အခန်းထဲက၌ထားကြ၏မတိုင်မီသုတ်ရည်ထိရာအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် 30 မိဘို့, ဘာသာရပ်များတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်မှထပ်မံထိတွေ့စရာမလိုဘဲအခနျး၏တွေကိုထိတွေ့ပေမယ့်နေဆဲ naloxone အားဖြင့် opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေချိန်တွင်ခဲ့ကြသည်။ Pavlovian အေးစက်အတွက် CS တစ်ဦးတည်းတင်ပြချက်များ, သင်တန်း, မျိုးသုဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ အဆိုပါ CPP ကလုပျထုံးလုပျနညျးရုံသာ Mehrara နှင့် Baum ၏စမ်းသပ်မှု 1 နှင့် Agustin-အဲဒီ့ et al ၏ CPP ကလုပျထုံးလုပျနညျးအတွက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ (2008) သည်ပုံမှန် US CS တွဲဖက်ထားသော US ဝယ်ယူသည့်အဆင့်တွင် naloxone ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး naloxone ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေ၊ Mehrara နှင့် Baum နှင့် Miller နှင့် Baum တို့၏စမ်းသပ်မှု ၂ တွင် Naloxone ၏သက်ရောက်မှုများသည်မျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများအတွင်းရှင်းလင်းစွာရှိခဲ့သည်။
naloxone CS-တစ်ဦးတည်း, တွဲ CS-အမေရိကန်ဝယ်ယူစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သုဉ်းနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယူဆ, စမ်းသပ်မှုတွေအလားတူအဘို့မှတ်ရရန်ငုံးအချက်အလက်များ၏အလုံးစုံတို့အဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Riters et al ၌တည်၏။ (1999), naloxone လိင်အခြေပြုကြည့်ရှုအပြုအမူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူး။ ဤစမ်းသပ်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင် Pavlovian-conditioned ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူကိုထောက်ပံ့သောလူသိများသောငုံး၏ကြက်ကြက်ကိုမြင်နိုင်သောထိတွေ့မှုဖြင့် CS window တွင်ယောက်ျားငုံး၏ချဉ်းကပ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးခဲ့သည် (Holloway & Domjan, 1993b) ။ Holloway နှင့်ဂျင်ဆင် (1997) နှင့် Holloway နှင့် Meerts (ထဲမှာ2003), naloxone အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါဝယ်ယူတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်မှု opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိသက်ရောက်မှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ အားလုံးသုဉ်းလုပျထုံးလုပျနညျးခုနှစ်တွင် (Holloway et al ။ , 2004; Holloway et al ။ , 2009; Holloway & Jensen, 1997; Holloway & Meerts, 2003), သို့သော်, naloxone ဖြစ်စေသိသိသာသာတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်သိသိသာသာများနှင့်သိသိသာသာသုဉ်း facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional လျှော့ချ။
opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသာသုဉ်းဖြန်ဖြေခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသင်ယူအကျိုးသက်ရောက်သောယူဆချက်သည်အခြားစာတမ်းများအတွက်ရလဒ်အတွက်အကောင့်အချို့ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။ အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ naloxone အုပ်ချုပ်ရေး၏မရှိခြင်းအတွက်မျိုးသုဉ်းရန်သိသိသာသာခံနိုင်ရည် (Balthazart et al ကြည့်ပါ။ , 1995) ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် opioids အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်၏ဤဇွဲဖျန်ဖြေ။ ရိုးရာဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများတွင် CS ကိုလျင်မြန်စွာနောက်ဆက်တွဲလိင်ဆက်ဆံသောအမေရိကန်များမှလိုက်လံစဉ်တွင်ဇွဲမလိုအပ်ပါ။ CS တုံ့ပြန်မှုကိုလျင်မြန်စွာနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်လိုက်နာသည်။ မျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများတွင် CS ကိုအမေရိကန်ကလိုက်နာခြင်းမရှိသောကြောင့်တုံ့ပြန်မှုသည်ဆက်တိုက်လုပ်ရန်ယန္တရားကိုသက်ဝင်စေရမည်ဖြစ်သည်။ Opioids သည်ဤယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်မျိုးသုဉ်းခြင်းအတွင်း၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအခြေအနေသာမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်ပေးသည့်တုန့်ပြန်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုနှောင့်ယှက်သင့်သည်။ ဤသည်ကိုဤနေရာတွင်အစီရင်ခံတင်ပြပြီးပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ bilevel chamber လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် CS သည်အခန်းထဲရှိအခြေအနေ၏အခြေအနေဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းအဆင့်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအပြုအမူအားစစ်ဆေးမှုသုံးခု၌ (van Furth & van Ree) 1994; ဗန် Furth & ဗန်ရိ, 1996; van Furth, Wolterink-Donselaar, & van Ree, 1994), ကြွက်မသည်အမျိုးသမီးမတင်ပြမီအခန်းထဲ ၅ မိနစ်ခန့်နေခဲ့ရသည်။ လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်ယေဘူယျရှာဖွေမှုအပြုအမူပုံသဏ္(ာန် (လိင်မှုလေ့လာသင်ယူမှုအပေါ်အပြုအမူစနစ်ချဉ်းကပ်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအတွက်လက်ရှိအထူးပြissueနာရှိ Domjan, Mahometa နှင့် Matthews ကိုကြည့်ပါ) သည်ဤရှည်လျားသောကြားကာလတွင်ဆက်လက်တည်ရှိရန်လိုအပ်သည် သင်ယူမှု၏သက်သေသာဓကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Naloxone ဒီလေ့လာမှုကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။ အလားတူစွာ Hughes et al အသုံးပြုသောဆာပလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်။ (1990), ဘာသာရပ်များတစ်လက်ခံအမျိုးသမီး, ဇွဲ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အတိုင်းအတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှတစ်ဦး fixed ကြားကာလအချိန်ဇယားအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်အပေါ်အကဲဖြတ်နှင့် naloxone သည်ဤတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှာဖွေစူးစမ်းနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်ပေမယ့်အားလုံးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှာဖွေစူးစမ်းနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက် opioids မဟုတ်သောသို့မဟုတ်နှောင့်နှေး-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်များ၏မျက်နှာများတွင်တုံ့ပြန်၏ဇွဲဖျန်ဖြေသောအနက်များ၏မျှော်လင့်ချက်များမှညီ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ဤသူအပေါင်းတို့မိတ်ဖက် preference ကိုပါဝငျသညျ။ ဒါဟာခြွင်းချက်မရှိယန္တရားများသို့မဟုတ် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional ယန္တရားများ၏ opioid ဖျန်ဖြေသည်ဤတွေ့ရှိချက်များအဘို့အကောင့်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီစမ်းသပ်မှုအတွက် Hughes et al အားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ (1990), CPP အချည်းနှီးသောအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူမဟုတ်ဘဲလက်ခံသူမအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူ copulate ဖို့အခွင့်အလမ်းခြားနားခြင်းဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, naloxone ၏လက်ခံနိုင်ဖွယ်အမျိုးသမီးညွှန်ကြားခြွင်းချက်မရှိအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုလက်ခံအမျိုးသမီးများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုလျှော့ချရန်လုံလောက်သောခဲ့ကြသည်။ ဤနေရာတွင် CPP မရှိခြင်းသည်လက်ခံနိုင်သောနှင့်လက်ခံမှုမရှိသောနှစ် ဦး စလုံး၏ပံ့ပိုးမှုရရှိသောတန်းတူညီမျှပမာဏကိုသာဆိုလိုသည်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုမရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်နိုင်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောရလဒ်သုံးခုကိုလက်ရှိအနက်နှင့်မကိုက်ညီသောဓာတ်ခွဲခန်းများမှဖော်ပြပြီးအားလုံးသောပဟေmိပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ ယောက်ျားများအဘို့, ဒီအရှိန်အဟုန်အေးစက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတော်လေးတိကျတဲ့ဖြစ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ တွင်းလေးခုမပါရှိသည့်အရှိန်မြှင့်အခန်းတစ်ခုလိုအပ်သည် (Ismail, Gelez, Lachapelle, & Pfaus, 2009) ။ ဒီပိုင်ထိုက်သောလိုအပ်ချက်၏အလင်းမှာ, အစ္စမေးလ် et al ၏တွေ့ရှိချက်အနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲသည်။ (2009) ထို naloxone တစ်ရနံ့အမျိုးသမီးတစ်အေးစက် ejaculatory preference ကို၏ဝယ်ယူပိတ်ဆို့။ ဒါဟာအမျိုးသမီးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအခါအားလျော်စွာမှလွတ်မြောက်ရန်များအတွက်အခွင့်အလမ်းဇွဲလိုအပ်မယ့်ပြည်နယ်ထုတ်လုပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအစတစ်ဦးဆက်စပ်ဥပမာကယ်လီ et al တွေ့မြင် naloxone ဝတ္ထု, မတရားရနံ့သတင်းအချက်အလက် (များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတူဝငျရောကျစှကျကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ , 2002) လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်နည်းလမ်း။ အလားတူကိစ္စများ Coria-Avila et al အတွက်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များနှင့်အတူနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်ပြန်ဆိုပါစေ။ (2008) ခက်ခဲသည်။ ဆန်းသစ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြားမှ (ဥပမာ Meerts & Clark)၊ 2009), ပဲတိကျစွာ PACE မိတ်လိုက်အကြောင်းကိုကြိုးရှာတွေ့သောအရာကိုအမျိုးသမီးမေးခွန်းတစ်ခုကိုဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဤ (Meerts နှင့် Clark ကအဖြစ်, သူ့ဟာသူ pacing ပါဝင်သည်2007) pacing ခွင့်ပြုမပါဘဲအမျိုးသမီးကြွက်တစ် CPP ကအခြေအနေနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာ naloxone သည်မျိုးသုဉ်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုအစီရင်ခံသော်လည်းအရက်သေစာသောက်ရန်ကြွက်နို့မျိုးစိတ်တွင်အေးအေးဆေးဆေးတုံ့ပြန်မှုများမရရှိခြင်း (Cunningham, Dickinson, & Okorn,) 1995) ။ သို့သော် naloxone ၏ဤဆိုးကျိုးများသည်အရက်ကိုအားဖြည့်သည့်အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအေးစက်စေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်မျိုးစိတ်များနှင့်မျိုးကွဲများနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည် (Bormann & Cunningham, 1997; Cunningham, Henderson, & Bormann, 1998) ။ Naloxone သည်အစားအစာသို့မဟုတ် sucrose တို့ဖြင့်ဆုချသောလီဗာပူးလ်အပြုအမူများပျောက်ကွယ်သွားစေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအေးခဲစေသောစမ်းသပ်မှုများ၌တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အနည်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်စေသည် (Norris, Perez-Acosta, Ortega, & Papini, 2009) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် opioids အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အခြေအနေများတွင်သင်ယူခြင်း၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေကအခြားအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးဘုံဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါအယူအဆအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု opioids ဟာနှောင့်နှေး၏မျက်နှာသို့မဟုတ် Non-အားဖြည့်အတွက်တုံ့ပြန်၏ဇွဲဖျန်ဖြေကြောင်း, 'လို' နဲ့ 'အကြိုက်' 'တို့အကြားလုပ်ထားပြီးကြောင်းဂုဏ်ထူးနှင့်အတူဘုံအတွက် features တွေရှိပါတယ်။ ချို့တဲ့နေတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပျက်ကွက်နေဖြင့်မည်သည့် hedonic အစိတ်အပိုင်းကျင်းပမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏တန်ဖိုးအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် like နှိပ်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှု, ဆုလာဘ်ပေးပို့ (Berridge အတူသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အာရုံခံအစိတ်အပိုင်းများ၏ hedonic ရှုထောင့်သည်, 2004) ။ Opioids အဆိုပါ amygdala မှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့်လိုဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ [D-Ala2, N-MePhe4, Gly-ol] -enkephalin (DAMGO) ၏ Microinjections တစ်μအဲဒီ receptor agonist, ဗဟို amygdala သို့သန်စွမ်း sniffing အတွက်ရလဒ်နှင့် sucrose တောင့်ပေးအပ်ခြင်းခန့်မှန်းတဲ့ CS ၏ nibbling ။ အဆိုပါဂါဘမြို့သား၏ MicroinjectionsA agonist muscimol သည်ဒေသအားမလှုပ်မရှားဖြစ်စေသည့်အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ချဉ်းကပ်မှုလျှော့ချခြင်း၊ sniffs နှင့် CS ၏ nibbles ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် (Mahler & Berridge, 2009) ။ နီးကပ်စွာဆက်စပ်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် NAC မှ opioid လုပ်ဆောင်မှုသည်လိုချင်သောအရာနှင့်နှစ်သက်သဘောရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုချိုသာသောအကျိုးကျေးဇူးအတွက်ပါ ၀ င်မှုကိုပြသခဲ့သည် (Smith, Berridge, & Aldridge, 2011).
ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စမ်းသပ်ချက်အတွက် opioid ရန်များ၏အုပ်ချုပ်မှု (လိုသော) နှင့် / သို့မဟုတ် hedonic တန်ဖိုးကိုများအတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု disrupts အကယ်. တစ်ဦး CS ၏ (ကဲ့သို့) conditional တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာအတွက်လျော့နည်းပြီးတော့ဆက်ဆက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအလိုလို မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ဤသည်ကျဆင်းခြင်း, သို့သော် CS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အနေဖြင့်အချိန်အတွက်ကွဲကွာသည်မဟုတ်ဖြစ်စေဘယ်မှာအခြေအနေများကန့်သတ်ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သျောလညျး, ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ opioid ဖျန်ဖြေ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဖြတ်ပြီးမြင်ပြီပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ Smith က Berridge နှင့် Aldridge (2011) လိုချင်ခြင်းနှင့်ချိုမြိန်သောဆုလာဘ်ကိုနှစ်သက်ခြင်း၏ opioid ဖျန်ဖြေခြင်းလေ့လာမှုအတွက်အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ CS နှစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုသည်ချိုသောလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြမှုနှင့်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ချိုမြသောဆုလာဘ်စနစ်တွင်၊ opioid လုပ်ဆောင်မှုကိုခြယ်လှယ်ခြင်းမှသာအနီးစပ်ဆုံး cue ကိုတုံ့ပြန်မှုများသာထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာဤနေရာတွင်တင်ပြထားသည့်လိင် - ဆုပေးသည့်စနစ်မှတွေ့ရှိချက်များနှင့်သိသိသာသာခြားနားနေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခုနှင့် CS တစ်ခုအားယာယီတွဲဖက်ခြင်း opioid လှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ Holloway & Jensen, 1997; Holloway & Meerts, 2003; Mehrara & Baum, 1990CS- လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကာလကြာရှည်မှုသည် opioid ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုအထိခိုက်မခံသောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း (ဥပမာ van Furth & van Ree၊ 1994) ။ သင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ opioid ဖျန်ဖြေပေါ်ကျဲစာပေအစီရင်ခံတစ်တတိယအင်္ဂါရပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုသောနှင့် Berridge နှင့်ချိုမြိန်-ဆုလာဘ်သည့်စနစ်၌သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသေးစိတ်သူတို့အားအလားတူ like နှိပ်ပြောင်းလဲမှုများထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူးစဉ်ကဲ့သို့သော, "ကိုပိုမို '' မွဲ '' အပြည့်အဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုအတွက် opioids ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။
opioids ဆုလာဘ်၏မရှိခြင်းအတွက်တုံ့ပြန် conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများ၏ဇွဲဖျန်ဖြေသောအယူအဆမှန်ကန်လျှင်, အတော်ကြာဟောကိန်းများလိုက်နာပါ။ CS နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်တင်ပြချက်များစတင်ခြင်းအကြားတိုတောင်း latency opioid ရန်ရှာမှီးနေစဉ်အတွင်းရှိသည်မဆိုသက်ရောက်မှု attenuate သငျ့သညျ။ အလားတူပဲရန်များ၏သက်ရောက်မှုများ CS-အမေရိကန်ကြားကာလတိုးအဖြစ်တိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ ဆာလုပျထုံးလုပျနညျးခုနှစ်, opioid ရန်အုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုသက်ရောက်မှုပိုရှည်ကြားကာလနှင့်ပိုကြီးတဲ့အချိုးအစားပေါ်ဖြစ်ပေါ်အတူလိုက်ပါသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများအတွက်လုပ်ဖို့အစီရင်ခံထားသကဲ့သို့အားလုံးအစာစားချင်စိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖြတ်ပြီး, opioid ရန်, မျိုးသုဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့သငျ့သညျ။ ပိုများသောအစီအစဉ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်သည်ဤဟောကိန်းများဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
Adkins-Regan, အီး, & MacKillop, EA (2003) ။ ဂျပန်ငုံး (Coturnix japonica) ပိုးမွှားများသည်မျိုးပွားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောအခြေအနေတွင်ဥများကိုဥများပိုမိုစိုက်ပျိုးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ တော်ဝင် Society ကလန်ဒန် B က၏တရားစွဲဆိုမှု, 270, 1685-1689 ။ [Crossref]
Agmo, အေ (2003a) ။ အထီးကြွက်များတွင်ခြွင်းချက်မရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုအပေါ် opioid သို့မဟုတ် dopaminergic သက်ရောက်မှုမရှိခြင်း။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 117(1), 55-68 ။ [Crossref]
Agmo, အေ (2003b) ။ အထီးနော်ဝေကြွက် (Rattus norvegicus) တွင်ခြွင်းချက်မရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု။ နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 117(1), 3-14 ။ [Crossref]
Agmo, အေ, & Berenfeld, R. (1990) ။ ကြွက်များတွင်သုက်ပိုး၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း - opioids နှင့် dopamine တို့၏အခန်းကဏ္။ ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 104(1), 177-182 ။ [Crossref]
Agmo, အေ, & Gomez, အမ် (1993) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့် naloxone ကို medial preoptic intoရိယာသို့ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 107(5), 812-818 ။ [Crossref]
Agmo, အေ, Rojas, ဂျေ, & Vazquez, P. (1992) ။ ယောက်ျားလေးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ဘိန်းဓာတ်၏တားစီးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ပြင်ပရှိဘိန်းစား receptor များကကမကထပြုနိုင်သည်။ Psychopharmacology, 107(1), 89-96 ။ [Crossref]
Agustin-Pavon, C, Martinez-Ricos, ဂျေ, Martinez-Garcia, အက်ဖ်, & Lanuza, အီး (2008) ။ လိင်နှင့်ချိုမြိန်ခြင်း - ဘိန်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးအပေါ် opioid မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုများ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 122(2), 416-425 ။ [Crossref]
Argiolas, အေ (1999) ။ Neuropeptides နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 23(8), 1127-1142 ။ [Crossref]
Balthazart, ဂျေ, ရိဒ်, ဂျေ, Absil, P. , Foidart, အေ, & Ball ကို, GF (1995) ။ ငုံးအတွက်အထီးလိင်အပြုအမူ၏အလိုဆန္ဒအပြင် consummatory ရှုထောင့်အန်ဒရိုဂျင်နှင့် estrogens အားဖြင့် activated နေကြသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 109(3), 485-501 ။ [Crossref]
တီးဝိုင်း, LC, & Hull, EM (1990) ။ Morial နှင့် dynorphin (1-13) ကို medial preoptic intoရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens သို့ထိုးသွင်း - အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန, 524(1), 77-84 ။ [Crossref]
Berridge, KC (2004) ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးသဘောတရားများ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ, 81, 179-209 ။ [Crossref]
Bormann, မင်၊ & Cunningham, CL (1997) ။ ကြွက်များတွင်အီသနောနေရာ၌အေးစက်စွာဖော်ပြခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းအပေါ် naloxone ၏သက်ရောက်မှုများ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 58(4), 975-982 ။ [Crossref]
Camacho, FJ, Portillo, W. , Quintero-Enriquez, O. , & Paredes, RG (2009) ။ အခွအေန ဦး စားပေးအားဖြင့်အကဲဖြတ်အထီးကြွက်များတွင် intromissions နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်၏ဆုလာဘ်တန်ဖိုး။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ, 98(5), 602-607 ။ [Crossref]
Coria-Avila, GA, Ouimet, AJ, Pacheco, P. , Manzo, ဂျေ, & Pfaus, JG (2005) ။ ကြွက်များတွင် Olfactory သည်မိတ်ဖက်ပါ ၀ င်မှုကို ဦး စားပေးသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 119(3), 716-725 ။ [Crossref]
Coria-Avila, GA, Solomon, CE, Vargas, EB, Lemme, I. , Ryan, R. , Menard, S. , et al ။ (2008) ။ အမျိုးသမီးကြွက်၌အေးစက်မိတ်ဖက် ဦး စားပေး၏အာရုံကြောဓာတုအခြေခံ: I. naloxone အားဖြင့်နှောင့်အယှက်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 122(2), 385-395 ။ [Crossref]
ခရော, LL, Holloway, KS, & Domjan, အမ် (1993) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်များ၏သဘောသဘာဝ။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်, 60(1), 55-66 ။ [Crossref]
Cunningham, CL, Dickinson, SD က & Okorn, DM (1995) ။ Naloxone မျိုးသုဉ်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့ပေမယ့်အီသနော - သွေးဆောင်အေးစက်ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူသို့မဟုတ်စကားရပ်ကိုမထိခိုက်ပါဘူး။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology, 3(4), 330-343 ။ [Crossref]
Cunningham, CL, Henderson, CM, & Bormann, မိုင် (1998) ။ အီသနော - သွေးဆောင်အေးစက်ရာအရပျ preference ကိုနှင့်အေးစက်ရာဌာနကိုမနှစ်သက်၏မျိုးသုဉ်း: naloxone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology, 139(1-2), 62-70 ။ [Crossref]
Cutmore, TR, & Zamble, အီး (1988) ။ အမျိုးသားကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် Pavlovian လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 17(4), 371-380 ။ [Crossref]
Dizinno, G. အ, Whitney, G. အ, & Nyby, ဂျေ (1978) ။ အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါမှယောက်ျားကြွက်အားဖြင့် ultrasonic အသံ: စမ်းသပ်ပြဌာန်းခွင့်။ အမူအကျင့်ဇီဝဗေဒ, 22, 104-113 ။ [Crossref]
Domjan, အမ်, Blesbois, အီး, & ဝီလျံ, ဂျေ (1998) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအေးစက်မှု၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုအရေးပါမှု - Pavlovian sperm release ကိုသုက်လွှတ်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 9, 411-415 ။ [Crossref]
Domjan, အမ်, & Holloway, KS (1998) ။ လိင်သင်ယူမှု။ G. အ Greenberg, & အမ် Haraway (Eds ။ ) ၌, နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ: တစ်လက်စွဲစာအုပ် (စစ။ 602-613) ။ နယူးယောက်: ပန်းကုံးနှိပ်ပါ။
Domjan, အမ်, O'Vary, D. , & ဂရင်း, P. (1988) ။ ဂျပန်ငုံးငံ၌အစာစားချင်စိတ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်း။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်, 50(3), 505-519 ။ [Crossref]
Garcia-Horsman, SP, Agmo, အေ, & Paredes, RG (2008) ။ အဆိုပါ medial preoptic intoရိယာ, hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယနှင့် amygdala ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့ naloxone ၏ထိုးသွင်း paced မိတ်လိုက်အပြုအမူအားဖြင့်သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကို။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 54(5), 709-716 ။ [Crossref]
Gessa, GL, Paglietti, အီး, & Pellegrini Quarantotti, B. (1979) ။ naloxone အားဖြင့်လိင်မလှုပ်မရှားကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူ၏ induction ။ သိပ္ပံ, 204(4389), 203-205 ။ [Crossref]
Gutierrez, G. အ & Domjan, အမ် (1996) ။ ဂျပန်ငုံး၌လေ့လာခြင်းနှင့်အထီး - အထီးလိင်ပြိုင်ဆိုင်မှု (Coturnix japonica). နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 110(2), 170-175 ။ [Crossref]
Gutierrez, G. အ & Domjan, အမ် (1997) ။ အထီးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဂျပန်ငုံး၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ (Coturnix japonica). နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 111(2), 135-142 ။ [Crossref]
Hollis, KL, Pharr, VL, Dumas, MJ, Britton, GB, & Field, ဂျေ (1997) ။ ဂန္တ ၀ င်အပြာအပြာရောင် gouramies အတွက်အ conditioning ခြေအနေအေးစေသည်Trichogaster trichopterus). နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 111, 219-225 ။ [Crossref]
Holloway, KS, Cornil, CA, & Balthazart, ဂျေ (2004) ။ အစာစားလိုသောလိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများသုဉ်းသည့်အခါ naloxone ၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန, 153(2), 567-572 ။ [Crossref]
Holloway, KS, & Domjan, အမ် (1993a) ။ လိင်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအခြေအနေ - ဟော်မုန်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုတန်ဖိုးကျခြင်းကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူလုပ်ငန်းစဉ်, 19(1), 47-55 ။ [Crossref]
Holloway, KS, & Domjan, အမ် (1993b) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအေးစက်: ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုအချက်များ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူလုပ်ငန်းစဉ်, 19(1), 38-46 ။ [Crossref]
Holloway, KS, & Jensen, CJ (1997, နိုဝင်ဘာ) ။ Naloxone pavlovian လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများမျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ပိုစတာ session ကို Psychonomic လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ 1997 အစည်းအဝေးများ Philadelphia, PA မှာပေးအပ်သည်။
Holloway, KS, & Meerts, အက်စ် (2003, ဖေဖော်ဝါရီ) ။ conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများမျိုးသုဉ်းအပေါ် naloxone ၏ဆိုးကျိုးများ: ပြည်နယ်မှီခိုသင်ယူမှု၏စမ်းသပ်မှု။ စက္ကူတိရိစ္ဆာန်သင်ယူနှင့်အပြုအမူ, ဆောင်းရာသီပန်းခြံ, CO အပေါ်ဆောင်းရာသီညီလာခံ၏အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
Holloway, KS, Shaw, JL, Cornil, CA, & Balthazart, ဂျေ (2009, June) ။ ဗဟို naloxone ထိုးထားတဲ့မတရားစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းကျဆင်း။ ပိုစတာ session တစ်ခုအပြုအမူ Neuroendocrinology အရှေ့လန်စင်း, MI များအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
Hughes, AM, Everitt, BJ, & ဟားဘတ်, ဂျေ (1990) ။ ယောက်ျားများကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် opioid peptides, ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်သန္ဓေသား၏ preoptic usရိယာထိုးသွင်း၏နှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှု: ဆာပအပြုအမူ၏လေ့လာရေး, အခြေအနေတွင်နေရာ preference ကိုနှင့်မိတ်ဖက် preference ကို။ Psychopharmacology, 102, 243-56 ။ [Crossref]
Ismail, N. , Gelez, အိပ်ချ်, Lachapelle, ဗြဲ, & Pfaus, JG (2009) ။ အရှိန်မြှင့်ခြင်းအခြေအနေသည်ကြွက်များတွင်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောအမျိုးသမီးအတွက်အေးမြသည့်သုတ်ရည်လွှတ်ပေးမှုကို ဦး စားပေးသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ, 96(2), 201-208 ။ [Crossref]
Ismail, N. , Girard-Beriault, အက်ဖ်၊ Nakanishi, အက်စ်, & Pfaus, JG (2009) ။ Naloxone, ဒါပေမယ့် flupenthixol, မဟုတ်, ကြွက်အထီးအတွက်အေးစက် ejaculatory preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှောင့်ယှက်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 123(5), 992-999 ။ [Crossref]
Kagan ကပြောပါတယ်, ဂျေ (1955) ။ မပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ differential ဆုလာဘ်တန်ဖိုး။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 48, 59-64 ။ [Crossref]
Kelley, AE, Bakshi, VP, Haber, SN, Steininger, TL, Will, MJ, & Zhang, M. (2002) ။ အဆိုပါ ventral striatum အတွင်းအရသာ hedonics ၏ Opioid မော်ဂျူ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ, 76(3), 365-377 ။ [Crossref]
Kotegawa, တီ, အာဘေး, တီ, & Tsutsui, K. (1997) ။ အထီးဂျပန်ငုံးများတွင်ရန်လိုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက် opioid peptides ၏ Inhibitory အခန်းကဏ္။ ။ စမ်းသပ်သတ္တဗေဒဂျာနယ်, 277(2), 146-154 ။ [Crossref]
Krause, အမ် (2003) ။ အမူအကျင့်ယန္တရားများနှင့်တုံ့ပြန် conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ neurobiology ။ Neurobiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း, 56, 1-34 ။ [Crossref]
Mahler, SV, & Berridge, KC (2009) ။ ဘယ်လိုချင်လဲ? ဗဟို amygdala opioid ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းကဆုလာဘ်အချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအလေးထားသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 29(20), 6500-6513 ။ [Crossref]
Matthews, RN, Domjan, M. , Ramsey, M. , & Crews, D. (2007) ။ သုက်ပိုးပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မျိုးပွားခြင်းကြံ့ခိုင်မှုအပေါ်လေ့လာမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 18(9), 758-762 ။ [Crossref]
McConnell, SK, Baum, MJ, & Badger, TM (၁၉၈၁) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် naloxone- သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အထီးကြွက်များတွင်သွေးရည်ကြည် LH အကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 15(1), 16-35 ။ [Crossref]
McIntosh, TK, Vallano, ML, & Barfield, RJ (1980) ။ catecholamine အဆင့်များနှင့်ကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူအပေါ် morphine, beta-endorphin နှင့် naloxone တို့၏ဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 13(3), 435-441 ။ [Crossref]
Meerts, SH, & Clark, AS (၂၀၀၇) ။ ကြွက်များသည်နေရာမရှိသောမိတ်လိုက်ခြင်းအတွက်အခြေအနေကို ဦး စားပေးသည်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 51(1), 89-94 ။ [Crossref]
Meerts, SH, & Clark, AS (2009) ။ လိင်အင်္ဂါ vaginocervical ဆွပေးခြင်းသည်ကြွက်များတွင်အေးစက်သောနေရာကို ဦး စားပေးသည်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 55(1), 128-132 ။ [Crossref]
Mehrara, BJ, & Baum, MJ (1990) ။ Naloxone သည်အသုံးအနှုန်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ သို့သော်ကြွက်များကအေးစက်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိသည်။ Psychopharmacology, 101(1), 118-125 ။ [Crossref]
Mendelson, SD, & Pfaus, JG (1989) ။ Level ရှာဖွေခြင်း - ကြွက်များတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုအသစ်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ, 39, 67-71 ။ [Crossref]
Miller က, RL, & Baum, MJ (1987) ။ Naloxone သည်ကြွက်များကိုနှောက်ထွက်စေပြီးမကြာမီကြွက်များတွင်အထီးကျန်အမျိုးသမီးများကိုမိတ်လိုက်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 26(4), 781-789 ။ [Crossref]
Mitchell, JB, & Stewart, J. (1990) ။ ဘိန်းကို intra-VTA ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်ကြွက်ကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 35(3), 643-650 ။ [Crossref]
မာဖီ, MR (1981) ။ Methadone ယောက်ျားဆီးရီးယားရွှေကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 14(4), 561-567 ။ [Crossref]
Norris, JN, Perez-Acosta, AM, Ortega, LA, & Papini, MR (2009) ။ Naloxone သည်အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ကွယ်စေပြီးစိတ်ပျက်စရာများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 94(1), 81-87 ။ [Crossref]
သိပ်မရှိပါဘူး, RG (2009) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ neurobiology သုံးသပ်စိစစ်။ ILAR ဂျာနယ်, 50(1), 15-27 ။
Paredes, RG, & Martinez, ဗြဲ (2001) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်ခြင်းအပြီး Naloxone လုပ်ကွက်များသည် ဦး စားပေးအခြေအနေကိုအေးစက်စေသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 115(6), 1363-1367 ။ [Crossref]
Parra-Gamez, L. , Garcia-Hidalgo, AA, Salazar-Juarez, အေ, Anton, B. , & Paredes, RG (2009) ။ Endomorphin-1၊ အထီးလိင်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ, 97(1), 98-101 ။ [Crossref]
Pfaus, JG (1999) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိ Opinions, 9(6), 751-758 ။ [Crossref]
Pfaus, JG, & Gorzalka, BB (1987a) ။ Opioids နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 11(1), 1-34 ။ [Crossref]
Pfaus, JG, & Gorzalka, BB (1987b) ။ opioid receptors ကိုရွေးချယ်သော activation သည်ကြွက်များတွင် Lordosis အပြုအမူကိုကွဲပြားစွာသက်ရောက်စေသည်။ Peptides, 8(2), 309-317 ။ [Crossref]
Pfaus, JG, Kippin, TE, & Centeno, အက်စ် (2001) ။ အခြေအနေနှင့်လိင်အပြုအမူ - သုံးသပ်ချက်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 40(2), 291-321 ။ [Crossref]
Riters, LV, Absil, P. , & Balthazart, J. (1999) ။ ဂျပန်ငုံးငရဲ၌အစာစားချင်စိတ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုအပေါ်နaloxone၏သက်ရောက်မှုများ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ, 66(5), 763-773 ။ [Crossref]
Sachs, bd, Valcourt, RJ, & Flagg, HC (1981) ။ nuloxone ဖြင့်ကုသသောကြွက်များ၏ Copulatory အပြုအမူနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 14(2), 251-253 ။ [Crossref]
Silberberg, အေ, & Adler, N. (1974) ။ ကြွက်များ၏ copulatory sequence ကိုအားဖြည့်တဲ့အချိန်ဇယားအားဖြင့်မော်ဂျူလာ။ သိပ္ပံ, 185, 374-376 ။ [Crossref]
Sirinathsinghji, DJ သမား (1984) ။ GnRH မှတဆင့်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖျန်ဖြေ: အ mesencephalic အလယ်ပိုင်းမီးခိုးရောင်အတွက် naloxone, beta-နဲ့အတူ Endorphins နှင့်၎င်း၏ antiserum အားဖြင့်အမျိုးသမီးကြွက်၏ lordosis အပြုအမူ၏ Modulation ။ Neuroendocrinology, 39(3), 222-230 ။ [Crossref]
Sirinathsinghji, DJ, Whittington, PE, Audsley, အေ, & Fraser, HM (1983) ။ beta-endorphin သည် LH-RH ဖြန့်ချိခြင်းအားဖြင့်ကြွက်များတွင် Lordosis ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ, 301(5895), 62-64 ။ [Crossref]
Smith က KS, Berridge, KC, & Aldridge, JW (2011) ။ ဦး နှောက်ဆုချခြင်းအတွက်အချက်ပြခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းအချက်ပြခြင်းမှပျော်ရွှင်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သိပ္ပံအမျိုးသား Acadamy ၏တရားစွဲဆိုမှု, 108(27), E255-E264 ။ [Crossref]
ဗန် Furth, WR, ဗန် Emst, MG, & ဗန်ရိ, JM (1995) ။ Opioids နှင့်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အ medial preoptic ofရိယာ၏ပါဝင်မှု။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 109(1), 123-134 ။ [Crossref]
ဗန် Furth, WR, & ဗန် Ree, JM (1994) ။ endogenous opioids နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနေ့စဉ်သံသရာ၏အလင်းအဆင့်တွင်။ ဦးနှောက်သုတေသန, 636(1), 175-179 ။ [Crossref]
ဗန် Furth, WR, & ဗန် Ree, JM (1996) ။ လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု: အ ventral tegmental inရိယာ၌ endogenous opioids ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန, 729, 20-28 ။
ဗန် Furth, WR, Wolterink-Donselaar, IG, & ဗန်ရိ, JM (1994) ။ Endogenous opioids သည်ကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အစာစားချင်စိတ်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရှုထောင့်များတွင်ကွဲပြားခြားနားစွာပါ ၀ င်သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 226, 606-613 ။
ဗန် Furth, WR, Wolterink-Donselaar, IG, & ဗန်ရိ, JM (1995) ။ ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း: ဦး နှောက် opioids နှင့် dopamine ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ, 21, 162-184 ။ [Crossref]
Whalen, RE (1961) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဝင်္သင်ယူမှုအပေါ်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ intromission နှင့် intromission မပါဘဲ mounting ၏ဆိုးကျိုးများ။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 54, 409-415 ။ [Crossref]
Wiesner, JB, & Moss, RL (၁၉၈၆) ။ intraventricular beta-endorphin အားဖြင့် ovariectomized, estrogen-progesterone-primed ကြွက်များတွင်လက်ခံခြင်းနှင့် Proceptive အပြုအမူ၏ဖိနှိပ်မှု: အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတိကျတဲ့၏လေ့လာရေး။ Neuroendocrinology, 43(1), 57-62 ။ [Crossref]
*ကီဗင်အက်စ် Holloway စိတ်ပညာဌာန
124 Raymond ရိပ်သာလမ်း
Poughkeepsie, NY12604, အမေရိကန်နိုင်ငံ